SUChat: ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောပြည်သူ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှု Linux မှ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံး ၀ င်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတွဲများကို ဆက်၍ အသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်း del အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linuxနှင့်သူတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်သောသူတို့ privacy, အမည်ဝှက် y ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေး ယေဘုယျအားဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဝေါ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပြောပါမည် ဟုတ်တယ်မလား.
ဟုတ်တယ်မလား သည်ကမ်းလှမ်းသောအသုံးဝင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည် XMPP ပရိုတိုကောကိုအခြေခံပြီးဗဟိုမှခွဲဝေထားသောအများပြည်သူဆိုင်ရာလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများ၏ privacy ကိုလေးစားသည် အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအကြားအချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်သွယ်ရေးကိုခွင့်ပြုသည်။
၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်အပြည့်အဝမဝင်ခင် ဟုတ်တယ်မလားသတိပြုသင့်သည်မှာအခြားအချိန်အခါများကဲ့သို့သောအခြားအလားတူဆိုဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးသည် NoGAFAM နှင့် PrivacyToolsအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ပို့စ်များကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြသည်။
"NoGAFAM သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုတိုးမြှင့်ရုံသာမကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ထုတ်လုပ်ထားသောအချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများ၏ပလက်ဖောင်းများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောအခြားသူများကိုလည်းသတိပြုမိစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ GAFAM အဖြစ်လူသိများကြသည်". NoGAFAM - အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့်လှုပ်ရှားမှု
"Privacytools သည်သင်၏ privacy ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုသူခြေရာခံခြင်းမှကာကွယ်ရန်အသိပညာနှင့်ကိရိယာများကိုပေးသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အွန်လိုင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်တိုးတက်မှုအသစ်များအကြောင်းဆွေးနွေးရန်နှင့်သင်ကဲ့သို့သင်နှင့်တူသောသီးသန့်သီးသန့်တည်ရှိနေသည့်လူအများစုကိုကျွန်ုပ်တို့အလယ်အလတ်အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း၏အဓိကကျသောအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့သုတေသနပြုပြီးအကြံပြုသည်။" PrivacyTools - အွန်လိုင်း privacy အတွက်တန်ဖိုးရှိသောအသုံးဝင်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်
1 SuChat: XMPP ပရိုတိုကောကိုအခြေခံပြီးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်
1.1 SuChat ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း applications များနှင့်အတူပေါင်းစည်းမှု
1.5 SUChat ကိုလှူဒါန်းပါ
SuChat: XMPP ပရိုတိုကောကိုအခြေခံပြီးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်
"SUChat.org သည်သင်၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုလေးစားပြီးလုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်သွယ်ခွင့်ပြုထားသော XMPP protocol ပေါ်တွင်အခြေခံထားသောဗဟိုမှခွဲဝေထားသောအများပြည်သူသုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ Jabber / XMPP ကိုထောက်ပံ့သော client ကို download လုပ်ပါ။"
လုံခွုံရေးဖြေ - ဆာဗာတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုအားကောင်းတဲ့စာဝှက်စနစ်ပရိုတိုကောများနှင့်အလဂိုရီဇင်များသာအသုံးပြုပြီးစာဝှက်တယ်။ စကားဝှက်များကိုဒေတာဘေ့စ်ထဲ၌သိုမဟုတ်သိုမဟုတ် SCRAM ပုံစံကိုသုံးသည်။
အရန်ကူးမိတ္တူများဖြေ - တစ်ရက်မှာဒေတာအားလုံးကိုအလိုလျောက် backup လုပ်တယ်။ ချို့ယွင်းချက်များသို့မဟုတ်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိပါကဆာဗာများကိုအပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားသည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖြေ - ဆာဗာတွေကနောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ spam protection, MAM, HTTP file upload ။ ၄ င်းတို့ကို DDoS တိုက်ခိုက်မှုမှကာကွယ်ပြီး IPv6 protocol ကိုထောက်ခံသည်။
မှတ်ချက်: SUChat ၏အများပြည်သူနှင့်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမျှဝေရန်နှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာနှစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆာဗာတစ်ခုမှပျက်ကွက်လျှင်၎င်းစနစ်သည်ဆက်လက်လည်ပတ်နေသည်။
အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း applications များနှင့်အတူပေါင်းစည်းမှု
အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်သူကိုငါတို့အဘို့ အခမဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု, အသုံးပြုသူများကသုံးနိုင်သည်သောတူညီသောအစီရင်ခံစာ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးဖောက်သည် ဝဘ်ပလက်ဖောင်းကိုတိုက်ရိုက်အသုံးမပြုနိုင်လျှင် (သို့) တိုက်ရိုက်မသုံးနိုင်ပါက -
သတိရပါ SUChat ၏အခမဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ထို့အပြင်ပါဝင်သည် အဘယ်သူမျှမတတိယပါတီကြော်ငြာ နှင့် အသုံးပြုသူကိုခြေရာခံသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြိုက်တယ် အခမဲ့, ပွင့်လင်းအခမဲ့စီမံကိန်း သူတို့တူညီတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပိုက်ဆံလိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းကိုထောက်ပံ့လိုပါကအောက်ပါမှလုပ်ဆောင်နိုင်သည် link ကို.
အခြားအလားတူဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုသင်သိလိုပါကအောက်ပါလေ့လာရန်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «SUChat.org», တစ်ကမ်းလှမ်းသောအသုံးဝင်သောနည်းနည်းက်ဘ်ဆိုက် XMPP ပရိုတိုကောကိုအခြေခံပြီးဗဟိုမှခွဲဝေထားသောအများပြည်သူဆိုင်ရာလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများ၏ privacy ကိုလေးစားသည် လူတိုင်းအကြားအချိန်နှင့်အမျှဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » SUChat: ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောပြည်သူ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးဝန်ဆောင်မှု